Nhoroondo - Prairie State Legal Services
1977: Musi waGumiguru 1, Prairie State Legal Services, Inc.yakatanga kushandira vatengi mumatare mashanu: Kane, Lake, McLean, Peoria, uye Winnebago.
1977 - 1979: Prairie State yakawedzera nzvimbo yayo yebasa, ichiwedzera mahofisi muKankakee, Ottawa, Rock Island, uye Wheaton.
1990s: Prairie State yakagadzira iyo Telefoni Counselling Service kuti iendese vatengi kumahofisi emunharaunda kana magweta aripo kumiririra vatengi uye nekupa vakawanda vatengi nemazano epfupi-kwenguva mutemo.
2000: Prairie State yakabatana neWest Central Legal Services Foundation, iri muGalesburg, ndokutanga kushandira mamwe mataundi matanhatu.
2009: Prairie State yakabatana neWill County Legal Assistance Chirongwa, iri muJoliet, ichiwedzera nzvimbo yayo yebasa kumatunhu makumi matatu nematanhatu kuchamhembe nepakati peIllinois.
2017: Prairie State yakapemberera gore rechimakumi mana rekupa mukana wakaenzana kururamisiro nekukudza 40 Heros yeRuramisiro munhoroondo yayo yese. Kuti udzidze zvakawanda nezve aya makumi mana magamba anonakidza, verenga chirongwa chedu pano.